विश्व क्षयरोग दिवस : ४१ हजार क्षयरोगी अझै उपचारबाहिर - GalaxyPati
विश्व क्षयरोग दिवस : ४१ हजार क्षयरोगी अझै उपचारबाहिर
२०७७ चैत्र ११, बुधबार ०८:४४
काठमाडौं । प्रत्येक वर्ष मार्च २४ तारिखलाई विश्व क्षयरोग दिवसको रुपमा मनाइन्छ । नेपालमा पनि आज ‘संकेत समयको, क्षयरोग अन्त्यको’ भन्ने नाराका साथ यो दिवस मनाइँदै छ ।नेपालमा अहिले एक लाख १७ हजार क्षयरोगी रहेको राष्ट्रिय क्षयरोग नियन्त्रण केन्द्रको तथ्यांक छ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियान सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको छ । स्थानीय तहहरुमा विभिन्न सूक्ष्म कार्यक्रम सञ्चालन गरी क्रमशः सबै पालिकालाई क्षयरोगमुक्त बनाउने केन्द्रको योजना छ । तर, सरकारको लक्ष्यविपरीत नेपालमा क्षयरोगीको संख्या भने वर्सेनि बढ्दै गएको देखिन्छ ।
बजेट छ, जनशक्ति छैन
चालु आर्थिक वर्षमा क्षयरोग नियन्त्रणका विभिन्न कार्यक्रमको लागि सरकारले ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । केन्द्रका निर्देशक डा. अनुज भट्टचनका अनुसार क्षयरोग नियन्त्रणका लागि बजेट अभाव छैन । जनशक्ति पनि पर्याप्त छैन । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जिल्ला र पालिकास्तरमा क्षयरोगका लागि फोकल पर्सन छैनन् । जनशक्तिको अभावमा पछिल्लो वर्ष क्षयरोगीको उपचार र औषधि वितरण कार्यक्रमसमेत प्रभावित भएको डा. भट्टचन बताउँछन् ।
औषधि व्यवस्थापन र वितरणमा बजेट र जनशक्ति धेरै खर्च हुन्छ । तर, जनशक्तिको अभावमा अहिले लक्ष्यानुरुपको काम गर्न सकिएको छैन । यसले क्षयरोगमुक्त स्थानीय तह घोषणा अभियानमा चुनौती थपेको छ ।
अभिनेता परेस रावललाई कोरोना सक्रमण पुष्टि